ရဲရင့်အောင်ရဲ့ New Year ဖြတ်သန်းမှုအစီအစဉ်
ရဲရင့်အောင် နဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ တို့ စုံတွဲလေးက ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် စုံတွဲလေးပါပဲ. ဒါပေမယ့် ရဲရင့်အောင်က Social Media တွေပေါ်မှာ စိတ်ခံစားချက်တွေ ဖော်ပြလေ့ မရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ.
ရဲရင့်အောင်က အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ရင့်ကျက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ နေပါပြီ.သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Social Media တွေပေါ်မှာ ရေးသားလေ့ မရှိဘူးလို့ မီဒီယာတွေကတဆင့် ပြောပြခဲ့ပါတယ်.
'' ရင့်ကျက်တယ်လို့လည်း ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်. ပြောချင်တာက ဘာမှမှ အကျိုးမှ မရှိတာ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတလေကျရင် ဖြစ်တတ်တယ်. ငါတော့ ဒီလိုခံစားနေရပြီ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း မြင်ရင်မြင် တချို့လူတွေလည်း မြင်ရင်မြင် ငါတော့ My Story မှာရေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ ခဏခဏဖြစ်တယ်. ရေးပြီးမှ ပြန်ဖျက်လိုက်ရတာ ခဏ ခဏပဲ'' လို့ ဆိုပါတယ်.
အဲ့ဒီနောက် သူ့ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး ဧငြိမ်းဖြူကိုလည်း Social Media တွေပေါ်မှာ စိတ်ခံစားချက်တွေ မဖော်ပြမိအောင်လည်း သေသေချာချာ ပြောပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်. မကြာသေးခင်က ဧငြိမ်းဖြူရဲ့ My Story မှာ လမ်းခွဲလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဂယက်ထခဲ့ပါသေးတယ်.
'' သူ့ကိုလည်း မတင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်. အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး. အခုတော့ သူပြင်နေတယ် ထင်တာပဲ. ထပ်ဖြစ်လာတော့လည်း ကျွန်တော်လည်း မတက်နိုင်ဘူးပေါ့. ကျွန်တော့် အတွက်ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး. အခုတော့ အချစ်ရေးက သာသာယာယာပဲ ပျော်တယ် ရွှင်တယ်ပေါ့'' ဆိုပြီးတော့ ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
အဲ့ဒီနောက် အဆိုတော် ရဲရင့်အောင်က သူ့ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ New Year ဖြတ်သန်းမှု အစီအစဉ်ကိုလည်း ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်. လက်ရှိမှာတော့ ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.
'' တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် သီချင်းဆိုစရာပွဲမရှိပဲနဲ့ တစ်နှစ်လောက်တော့ဖြတ်သန်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်. ဒီနှစ်ဆို သီချင်းဆို စရာမရှိဘူး. ရှုတင်ကလည်း ညဘက် မရှိဘူးဆိုရင် New Year ကို New Year လို့ ခံစားပြီး လည်လို့ရတယ်. ညပိုင်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ မရှိပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းတယ်'' လို့ ဆက်လက်ပြောပြလာပါတယ်.
အဆိုတော် ရဲရင့်အောင်နဲ့ မော်ဒယ်လ် Dancer မယ်လေး ဧငြိမ်းဖြူ တို့ အတွဲကိုတော့ မသိတဲ့ပရိသတ် မရှိသလောက်ပါပဲ။ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သင်္ကြန်အပြီးမှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက် စလုံးဟာ လူငယ်တွေလည်း ဖြစ်သလို အောင်မြင်လျှက်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင် စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်သူသက်တမ်းက တစ်နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပါပြီ။